Daliys nihazakazaka ho an'ny fitiavana ary aoka ny fitiavana handeha hiaraka Dailys - China Changzhou Dailys
Janoary, Vientiane hihahenjana rehetra, ary Dailys feno fitiavana. Ny fanomezana fiantrana fanentanana nanomboka tamin'ny Novambra.
Ny olon-drehetra ao amin'ny Leeds nanao ny ezaka ho amin'ny hetsika. Ny fanomezana be fitiavana ny asa dia tsy mitafy akanjo tonta voangona afovoan'ny, ho any an-tendrombohitra ny mitokana ny ankizy, angamba tsy dia mila akanjo tonta fa izany dia tsara akanjo vaovao. Tsy manome ny tapa-akanjo mba hanampy hatsaram-panahy amin'ny mahantra ankizy
Tamin'ny 10 Janoary, izahay vonona ny rehetra handefa ny akanjonay ho any amin'ny paositra. Naniraka ny akanjonay izahay ho any amin'ny paositra, ary naniraka ho any amin'ny faritra an-tendrombohitra lavitra ho an'ny ankizy izay mila ny akanjo.
Dailys foana niahy ny olona manodidina Dailys! Izany dia asa kely ihany, fa hery lehibe mba ho entina miaraka. Izany ihany koa ny vokatry ny mpiray ezaka. Ny fiaraha-monina Mitaky fitiavana, The Times mila antsika hanitatra ny tanana, hamindroana ny fiaraha-monina. Ny fitiavana dia tahaka ny rano indray mitete, dia tsy afaka handemana ny sombin-tany, maro miaraka mampisavoana ny rano ho toy ny ranomasina dia afaka mitsimoka indray eto an-tany.
* CAPTCHA: azafady mifidy ny Tree